Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Kwadoro - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ụdị Music na-eji agba aja aja na-acha odo odo na pink na-eme ka nwa agbọghọ dị jụụ
Ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị iji Ụdị Music na -eme ihe ngosi ink na agba aja aja n'akụkụ; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
2. Egwu Ụdị maka nwa agbọghọ na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ imepụta ime ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ Ụdị Music maka nwa agbọghọ na-eji akwụkwọ pink ink na-acha anụnụ anụnụ n'akụkụ; egbu egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka ha mara mma ma dị mma
3. Ụda Music maka Ụmụ nwanyị nwere nkochi ink nke pink mere ka ha dị mma
Brown na-ekpuchi ụmụ nwanyị na-aga maka Tattoo Music na -emepụta ink pink na n'akụkụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị ka ndị na-adọrọ adọrọ
4. Egwu Ụdị na azụ azụ mee ka otu nwanyị lee anya
Ụmụ nwanyị ga-aga maka Egwu Music na azụ azụ. Nke a na-eme ka ha mara ihu ọha n'anya
5. Egwu Ụdị na ọkara aka maka Women ha na-eji ejiji ink na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ Ụdị Music na mgbịsị ink nke ọchịchịrị; egbu egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka ha mara mma ma dị mma
6. Ụda Music na azụ na-eweta anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ na-eto eto na-etinye aka na-enweghị aka ga-ahụ Ụdị Music na azụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ihe mara mma
7. Ụda Music na ejiji anụnụ anụnụ na-eweta ọmarịcha anya
Ụmụ nwanyị Brown na nwa ntutu isi ga-ahụ Ụdị Music na ejiji anụnụ anụnụ na azụ azụ; egbu egbu egbu a na-acha ntutu na akpụkpọ ahụ iji mee ka ha yie ihe dị mma ma maa mma
8. Ụda Music na ihe ejiji ink nke ọchịchịrị mere ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị iji Ụdị Music na-eji mgbịsị ink nke gbara ọsọ na ụkwụ. Nke a na-eme ka ụmụ agbọghọ mara mma.
9. Egwu Ụdị n'azụ ntị eme ka anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka abụ Music mara mma n'azụ ntị. Ejiji egbu egbu a mara mma.
10. Uwe ink nke ink nke ozo Ụdị n'olu mee ka ụmụ agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ ga-aga maka Mpempe Music na mkpịsị onk nke oji n'azụ olu na-eme ka ndị mmadụ mara mma.
11. Egwu Ụdị n'olu nke ladies mee ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị ndị na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke ga-aga maka ink na-acha oji, Ụdị Tattoo Music na azụ n'olu iji mee ka ha yie ihe mara mma ma mara mma
12. Ụda Music na mkpịsị ink nke oji na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ndị inyom na-ahụ n'anya nke ọma ga-ahụ Ụdị Music na mkpịsị aka onk na mkpịsị ụkwụ. Ụdị egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka anya dị mma
di na nwunyeaka akazodiac akara akaraegbu egbuegbu egbu ebighi ebiọnwa tattoosụmụnne mgbuegbu egbu osisi lotusegbu egbu maka ụmụ nwokendị mmụọ oziGeometric TattoosAnkle Tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọenyí egbu egbuegbu egbu diamondkoi ika tattooakara ntụpọegbu egbu hennaUche obiọdụm ọdụmazụ azụna-adọ aka mmaegwu egwuarịlịka arịlịkaegbu egbu egbuegbu egbu mmirimehndi imeweụkwụ akangwusi pusiegbugbu egbugburip tattoosakpị akpịNtuba ntugharin'olu oluna-egbu egbuechiche egbugbuEgwu ugoakwara obiỤdị ekpomkpaudara okooko osisiaka mma akandị na-egbuke egbukeima ima mmaaka akamma tattoosagbụrụ eboegbu egbu okpuokpueze okpuezennụnụenyi kacha mma enyi